हामीले सपनामा मकै देख्दा के हुन्छ? जान्नुहोस् ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
सपना हामी सबैले देख्ने गछौ्रँ । कुनै पनि सपनाको फल शुभ र असुभ हुने गर्छ । सपना कुन समयमा देखिएको छ र कस्तो सयमा देखिएको छ त्यही अनुसार हामीलाई सपनाको फल मिल्ने गर्छ ।
यदि हामी एकदमै चिन्तामा र दिनभर त्यही कुरामात्र सोच्छौँ बेलुका त्यही सपनामा देख्छौँ भने त्यो सपनाको कुनै अर्थ हुदैन तर यदि हामीले अकस्मात सोच्दै नसोचेको कुरा सपनामा देख्छौँ भने त्यो सयमा अनुसार फल मिल्ने गर्छ ।
आज हामी तपाईलाई सपनामा मकै देख्दा के हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ । सपनामा मकै देख्नु सपना शास्त्र अनुसार एकदमै शुभफल मान्ने गरिन्छ ।
यसले फटिलिटि क्षमताको पनि विकास भइरहेको पनि जनाउने गर्दछ । यदि तपाईले सपनामा मकै खाएको देख्नु भयो भने त्यसले तपाईको आफ्नो धारणा, आफ्नो गल्ति, धनसम्वन्धीलाई जनाउने गर्छ । यदि तपाईले मकै स्वादलिदैँ खानु भएको छ र मिठो लागेको छ भने यसले आउने सयमामा खुसी रहने जनाउछ र आफ्नो जुन धन खर्च गर्ने प्रयास त्यो सहि दिशामा हुने गर्दछ ।
साथै पाकेको मकै देख्नु पनि एक राम्रो शुभ सपना मान्ने गरिन्छ । यस सपानाले तपाईले आफ्नो लागि जे खर्च गर्दै हुनुन्छ त्यसबाट तपाईलाई खुसी मिल्ने देखिन्छ । प्राप्त हुने धनको सहि दिशामा खर्च गरी जसले आफूलाई खुसि र सफलताको अनुभव हुने गर्छ ।
यदि तपाईले मकैको खेती लगाएको सपना देख्दै हुनुन्छ यसले तपाईलाई सफलताको नजिक र छिटै सफलता मिल्नेवाला छ भन्ने जनाउछ ।
र तपाईले धेरै लामो र कठिन समयसगै गरेको मेहनतको सफलता मिल्ने संकेत जनाउँछ । यदि तपाईले मकैको ठूला ठूला मकैकोबोट देख्नुहुन्छ भने यो पनि सफलता संकेत गर्दछ ।
धन प्राप्ति हुने संकेत गर्छ । यदि तपाईले कुहेका,गलेका, खान अयोग्य मकै सपानमा देख्नु भयो भने यो सपना एकदमै नरामा्रे मान्ने गरिन्छ । यसले आउने सयमामा तपाईले दुख र कष्ठ चिन्ताको समाना गर्न पर्छ भन्ने संकेत गर्छ । एजेन्सी
सुत्ने कोठामा यस्ता बस्तु राख्दा हुन्छ दाम्पत्य सुख जान्नुहोस् !
अहिलेको बदलिदो समयसँगै विवाहमा अनेक समस्या सृजना हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले यदी तपाईले विवाहित
सपना हामी सबैले देख्ने गर्छौ । कुनै सपना सुभ फल दिने खालको हुन्छ भने कुनै